Raisul wasaare xasan cali kheyre ayaa xafiiskiisa ku qaabiley wasiirka arimaha dibadda ee dalka qadar.
August 19, 2019 admin Wararla Gudaha 0
Wasiirka arrimaha dibadda ahna Ra’iisul Wasaare ku-xigeenka Qatar, Sheikh Mohammed bin Abdulrahman bin Jassim Al Thani iyo wafdi uu hoggaaminayo oo qayb ay ka ahaayeen Wasiirka wasaaradda gaadiidka, isgaarsiinta iyo dekada dawladda Qatar, Jassim Bin Saif Ahmed Al Sulaiti ayaa maanta booqasho ku yimid magaalada Muqdisho.
RaiRa’iisul Wasaaraha Jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya, Mudane Xasan Cali Khayre iyo wasiirka arrimaha dibadda Qatar ayaa xafiiska Ra’iisul Wasaaraha ku yeeshay kulan ay uga wada hadleen adkeynta xariirka soo jireenka ah ee labada dowladood iyo dardar gelinta mashaariicda ay Qatar ka fuliso Soomaaliya.
Dowladda qadar ayaa balan qaadey inay dib u dhiseyso dekedda hobyo.
Madaxweyne farmaajo ayaa si diiran loogu soo dhaweeyey dalka jabuuti.